ပွင့်လင်း - တံခါးကြိတ်စက်, သတ္တုကြိုးကွင်းဘီး, စက်သီးပွတ်ဆွဲကူးပြောင်းမှုသံမဏိဆွဲယူကြိုးကွင်းကြိတ်စက်,
ဂိတ် System ကိုဆွဲယူ Cantilever
This is Miss huang fromZhejiang Open Electromechanical Technology Co., Ltd. Our company R&D and production of gate & door accessories more than 15 years in China. We have our own factories, it makes sure our offer is always very competitive and reasonable. You can visit our webs...ဆက်ဖတ်ရန် »
Hangzhou ၏ WestlakeSong မင်းဆက်မြို့မှတစ်ဦးကခရီးစဉ်
အချိန် post: ဇန်နဝါရီ-10-2018
Westlake နှင့် Hangzhou ၏သီချင်းမင်းဆက်မြို့မှတစ်ဦးကခရီးစဉ် ဆက်ဖတ်ရန် »
MingQing မင်းဆက်နန်းတော်ဥယျာဉ်ကိုသာယာလှပ areaso
အချိန် post: ဇန်နဝါရီ-03-2018
"အရှေ့ဟောလိဝုဒ်" အကြီးမားဆုံးသာယာလှပ area- "ဟုသူ Ming နှင့်ချင်းမင်းဆက်နန်းတော်ဥယျာဉ်ကိုသာယာလှပဧရိယာ" 2200 တရုတ်ဧကတစ်မြေဧရိယာယူထားသော။ တစ်ခုလုံးသာယာလှပဧရိယာကွမ်ကျိုးဟောင်ကောင်လမ်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအခြေစိုက်စခန်း, ခြေရင်း, အမင်နှင့် Qing D ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ဖို့သေနတ်စစ်တိုက်အပိုင်းအစအုပ်ချုပ် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
နေရပ်လိပ်စာ: NO.18 Longling လမ်း, တောင်ပိုင်းပန်းခြံ, Longyou ခရိုင်, Zhejiang ပြည်နယ်, တရုတ်။
E-mail ကို: sales2@loetc.com
ဖုန်းနံပါတ်: ယခုကျွန်တော်တို့ကို Call: + 86-570-7255110
ဖက်စ်: ယခုကျွန်တော်တို့ကို Call: + 86-570-7255057
အားလုံးအခွင့်အရေးများ© 2017.Zhejiang ပွင့်လင်းလြှပျစစျနည်းပညာ Co. , Ltd မှ reserved ။ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှု: zjcbo.com XML ကို
ဟက်တာ၏ WestlakeSong မင်းဆက်မြို့မှတစ်ဦးကခရီးစဉ်ကို ...
Westlake နှင့် Hangzhou ၏သီချင်းမင်းဆက်မြို့မှတစ်ဦးကခရီးစဉ်